फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, लिटरको कति ? - नेपालबहस
१७ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुईले वृद्धि गरेको छ । यस्तै डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु १.५० ले वृद्धि गरेको छ ।
Previous articleबढ्दै कोरोना सङ्क्रमण, आज कहाँ कति संक्रमित ?
Next articleविदेशमा अलपत्र परेका स्वदेश फर्किने क्रम जारी
स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमिततामा दोषीलाई कारवाही खोई ?
बाढीले पुल जोखिममा : सडक अवरुद्ध, खेती र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति